Hanao Ny Politika Hifanaraka Kokoa Amin’y Maha-Olona Ary Hanamboatra Tetezana: Fijerin’i Katie Brown Amin’ny Lafiny Literatiora An’i Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2015 10:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, عربي, English
Katie Brown, maneho ny asany ao amin'ny “Manifiesto: País,” izay anomezany ireo valinteny amin'ny “fametrahana fitiavan-tanindrazana amin'ny politika ara-kolontsaina Bolivariana .” Dikasary nalaina tamin'ny fampahafantarana nataony, nalaina tao amin'ny YouTube an'ny Tambajotra Venezoelana ho an'ny Fikarohana .
Ao anatin'ireo sehatra maro tsy mitsahatra mitombo ety amin'ny Aterineto mikaroka ny literatioran'i Amerika Latina, mitàna ny anjara toerany manokana ny bilaogy Literatiora Venezoelana an'i Katie Brown. Fanangonana voakajy an'ireo tafatafa, ireo asa (angano/arira) foronin'ny saina avy any Venezoela ny tetikasany, ary indrindra— ary indrindra fa jerena avy amin'ny mason'ny Britanika iray mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo.
Ao amin'ny bilaoginy, mampahafantatra ny fandalinan'ny Venezuelan Literature i Brown, miasa mafy mba hampivelatra ny fahatakaran'ny olona ny fiarahamonina somary sarotrarotr'ilay firenena ary ny tantara ara-politikany amin'ny alàlan'ny fianarana ny momba ny angano sy arira eo an-toerana. Manangona sy manadihady io lafiny iray manan-danja amin'ny firenena io ny “Venezuelan Literature“. Na mbola tsy nitsidika an'i Venezoela mihitsy aza izy, nampiasa ny literatiorany i Brown mba hamoronany fifandraisana akaiky amin'ilay firenena sy ny kolontsainy. Vao haingana ny Global Voices no niresaka tamin'i Brown momba io fifandraisana io sy ny maro hafa koa.
Global Voices (GV): Milaza ianao fa tsy hita eo amin'ny sehatry ny fanontàm-boky miteny Anglisy i Venezoela, miaraka amin'ireo firenena hafa any Amerika Latina. Inona no nahatonga anao hisafidy an'i Venezoela fa tsy ny iray amin'ireo firenena hafa?
Katie Brown (KB): Amin'ny ampahany, satria i Venezoela sahala amin'ny firenena midadasika sy manan-karena, raha oharina amin'ireo firenena hafa tsy hita eo amin'ny tsenan'ny asa soratra miteny Anglisy, toa an'i Ekoatera, Paragoay, na ireo firenena ao Amerika Afovoany. Hatry ny niakaran'i [Filoha teo aloha Hugo] Chávez teo amin'ny fitondrana, lasa nifantohan'ny fikarohana ara-politika sy ny momba ny olombelona amin'ny lafiny rehetra, izay miha-mitombo hatrany, i Venezoela; noho izany, hitako fa hafahafa raha tsy mifanaraka amin'ireo fandalinana ara-kolontsaina izany.
Miaraka amin'izany ihany, efa nifantoka be tamin'ny rohy misy eo amin'ny nasiônalisma sy ny kolontsaina aho hatrizay, ka dia voasarika ho amin'i Venezoela noho ny nasiônalisma matanjaka be izay mampiavaka ny governemanta Bolivariana koa. [Mitodika kokoa amin'ny hetsika sosialin'ny elatra havia sy ny zotra politika ao Venezoela nataon'i Hugo Chávez ny atao hoe “Revôlisiôna Bolivariana”.]
GV: Nilaza ihany koa ianao hoe tena tsy afaka teo mihitsy raha namaky ny boky Venezoelana nanànanao voalohany. Inona no tena nanintona anao tamin'izany?
KP: Milaza ny asasoratra Venezoelana nentimpaharazana ho toy izao i Victor Bravo : tsy misy dikany, miteniteny foana, mahagaga, ary fiorenana amin'ny ratsy. Nanintona ahy mandrakariva ny zavatra mahagaga sy maizimaizina.
Tiako ireo tantaram-pitiavana Venezoelana sy ireo angonà tantara fohy, noho ny antony samihafa, fa toa misy zavatra maizina izany amin'izy ireo. Ny fampihomehezana maintin'i Chulapos Mambo (Juan Carlos Méndez Guédez). Ny tantara mampalahelo mahafinaritr'i Blue Label/Etiqueta Azul (Eduardo Sánchez Rugeles) ary ny La Enfermedad (Alberto Barrera Tyszka), ireo no boky roa izay tena nanaitra ahy tamin'ny zavatra nolazainy momba ny fitiavana sy ny famoizan-javatra.
GV: Inona ireo tantara tena mba voalaza matetika amin'ny literatiora Venezoelana ankehitriny?
KB: Amin'izao fotoana izao, miasa amin'ny tahirinà asasoratra Venezoelana amin'ny vaninandro ankehitriny aho izao, izay havoakan'ny Ragpicker Press. Naharay tantara maherin'ny 100 izahay, crónicas [tantara tsy angonongano mamerina mitantara ireo zava-mitranga manokana eo amin'ny fiainana ara-tsosialy] ary ampahany avy amin'ireo tantaram-pitiavana, izay mampiseho karazany maro tokoa eo amin'ny lafiny votoatin'ny tantara sy ny fomba itondràna azy. Hitanay fa misy miverimberina ireo votoatin-kevitra sasany, na izany aza: indrindra, fahafatesana maro sy firaisana ara-nofo maro!
Manana tantara maro manindrona izahay, avy amin'ny hetsika fanonganana niseho ny taona 1992 sy ireo hetsi-panoherana ny taona 2014, izay tena mampitamberina tokoa ireo fitoviana eo amin'izy roa ary ny tsy fandriampahalemana mitohy hatrany atrehan'ireo Venezoelana. Fotokevitra fahita matetika ny tsy fandriampahalemana ara-toekarena, tsy fahampian'ny zavatra, politika manao an-tendrony, ary ny vono olona; ary ihany koa ireo embona sy fahatsiarovana, sy ireo fifandraisana mahazatra. Matroka izany, fa ao anatin'ireo tantara ireo, misy foana ny hanihany, ny hafanana, ary ny fijoroana.
GV: Inona no eritreritra vitanao naorina momba ilay firenena avy tamin'ireny tantara ireny? Inona no nanetsika ireo Venezoelana mpanoratra ireo mba hanoratra ireny andro ireny?
KB: Ambonin'ny zavatra rehetra, mieritreritra aho hoe misy ny finiavana hanoratra tantara tsara, tamin'ny fomba nasiam-pamoronana, mba hampihetsika ireo mpamaky amin'ny lafiny sasany. Ankoatra izay, manana ny antony manokana azy samirery hanoratany koa ny mpanoratra tsirairay.
Tao anatin'ny taona maro loatra izay, nisy ny fomba fijery ny literatiora Venezoelana ho toy ny tsy fahombiazana, noho ny tsy fisian'ireo mpanoratra Venezoelana tao anatin'ny Fipoahan'ny [Asasoratra tao Amerika Latina] ny tena antony lehibe, ary ny tsy fahitana ny asasoratra Venezoelana any ivelany. Satria manomboka miala ilay firenena ny olona ankehitriny, ary mizara ny literatiorany amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy vaovao, ary satria manomboka miha-malaza ireo trano madinika fanontàna boky tantanan'ny olon-tsotra ao Venezoela, toy ny Lugar Común, Bid&Co ary ny PuntoCero, miha-hitan'ireo Venezoelana fa mila hetsika ny literatiorany. Mieritreritra aho fa manome tosika ho an'ireo mpanoratra maro izany mba hanandrana ny hiasa any.
GV: Tantara toy ny ahoana no eritreretinao hoe mbola tavela ka horesahana amin'ny literatiora Venezoelana?
KB: Inona ireo tantara mbola tavela ka horesahana n'aiza n'aiza?! Ao amin'ny Rating (Naoty), an'i Alberto Barrera Tyszka, milaza ilay mpandray anjara fototra, Manuel Izquierdo, fa tokony hijanona tsy hanoratra intsony ny rehetra ankehitriny satria efa voalazan'ny olon-drehetra daholo ireo karazana tantara rehetra. Tsy miombon-kevitra amin'izany mihitsy aho. Mahita zava-baovao hatrany aho, tantara tsy ampoizina — na fomba hafa entina mitantara azy ireny indray — amin'ny literatiora rehetra, fa tsy hoe ao Venezoela fotsiny akory.
GV: Inona ireo bilaogy hafa arahanao miresaka ny literatiora any Amerika Latina ?
KB: Manaraka loharano maro mitatitra momba ny literatiora Venezoelana aho, mazava loatra, indrindra fa Ficción Breve, izay manao zavatra lehibe tokoa mba hanohanana ireo mpanoratra, indrindra ny Premio de la Crítica izay avoakan-dry zareo isan-taona. Eo ihany koa ny Prodavinci, Qué Leer [Inona no Vakiana], Letralia, ary ilay iray izay hitako hoe tsy dia maninona ihany raha ataoko ao amin'ny PhD mombamomba ahy : Nalgas y Libros [“Butts” sy Boky]. Mandrisika mandrakariva ny olona aho mba hamaky ny bilaogy bilaogy Venepoetics an'i Guillermo Parra , izay andefasan'ny mpanoratra ny dikantenin'ireo poezia Venezoelana.
GV: Iza avy ireo firenena tsy hita ao amin'ny tontolo miteny Anglisy?
KB: Ankoatra ilay The Polish Boxer (Poloney Mpanao ady totohondry) an'i Eduardo Halfón, tsy dia hita loatra ireo literatiora kely avy any Amerika Latina izay voadika. Toy izany ihany koa, tena tsy hita mihitsy i Paragoay sy Oragoa ao anatin'ny angon-drakitry ny “The Three Percent” -Telo Isan-jato- ny fandikàna amin'ny teny Anglisy mihitsy, tato anatin'ny taona faramparany. Tsy resahana ny literatiora amin'ny teny Espaniôla avy any ivelan'i Amerika Latina, avy amin'ireo firenena sahala amin'i Filipina sy Maraôka.
Afaka hita amin'ny Aterineto, ao amin'ny Tambajotran'ny Fikarohana Venezoelana ny maro amin'ireo asan'i Katie Brown. Ny taona 2014, nanao famelabelaran-kevitra ihany koa i Brown tao amin'ny Anjerimanontolo Afovoany ao Venezoela, natrehan'ireo Venezoelana maherin'ny 60, mpanoratra sy manampahaizana, izay niasa mba hitrandraka “hevitra iray momba ilay firenena.”